Uncategorized – Yaw Myanmar
လုပ်ကွက်အတွင်းမှ တန်ဘိုးမြင့် ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို ရေမဆေးသမားများ ရရှိ
လုပ်ကွက်အတွင်းမှ တန်ဘိုးမြင့် ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို ရေမဆေးသမားများ ရရှိ …. ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိပ်မူအုပ်စု မမုံကျေးရွာရဲ့ ကပ်လျက် အဲဗားဝင်းနားအုပ်စု ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေး ကုမ္မဏီ လုပ်ကွက်အတွင်း က တန်ဘိုးမြင့် ကျောက်စိမ်းတတုံးကြီးကို ရေမဆေးရှာဖွေသူတွေက မေလ ၈ ရက်နေ့က ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးကို လုပ်ကွက်အတွင်း အချိန်ပိုင်းရေမဆေးကျောက်ရှာဖွေခွင့် ပြုတဲ့ အချိန်မှာ တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကီလို ငါးရာကျော် အလေးချိန်ရှိတယ် လို့ အဆိုပါကျောက်ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး ဝင်ရောက်ထမ်းကူခဲ့တဲ့ ဂျော်ကီရေမဆေးသမားတဦးက ပြောပါတယ် ။ “ ကျောက်ကို လုပ်ကွက် လုံခြုံရေး ရဲတွေကို ငါးတစ်ပေးမယ် ( အဆိုပါကျောက်စိမ်းတုံးရောင်းချရလျှင် ရောင်းရငွေရဲ့ ငါးပုံ တပုံ ပေးရ) ဆိုပြီး ညှိသယ်ခဲ့ရတာ ။ ကျောက်အပြင်ရောက်တော့ …
မစိမ့်ထက်ကို ရှာဖွေခဲ့ရာ ဂျာကင်နှင့် ပစ္စည်းများ တွေ့ရှိရာနေရာအနီးတွင် သွေးစ၊ သွေးနများ မတွေ့ရှိ လက်ကိုင်ဖုန်းလည်း ပျောက်ဆုံးနေ
ဖန်ဂရန် ရာဇီ ရေခဲတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေမတော်တဆပြုတ်ကျပျောက်ဆုံးနေသော မစိမ့်ထက်အားရှာဖွေ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ပထမအကြိမ်ရှာဖွေခဲ့ခြင်းပေါ်အင်တာဗျူး မေ ၁၃ ရက် ပြီးခဲ့တဲ့သင်္ကြန်မတိုင်မီ ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့ကThe Summiter လို့ခေါ်တဲ့အပျော်တမ်းခြေလျင်တောင်တက်အဖွဲ့ဟာလူအင်အား (၂၀) နဲ့အတူ ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျား ပူတာအိုမြို့နယ် ဖန်ဂရန် ရာဇီရေခဲတောင်ထိပ်ကနေပြန်အဆင်းမှာ မနက် ဝ၉:၃၀ ချိန်ခန့်မှာ မစိမ့်ထက်ဟာ မတော်တဆခြေချော်ကျပြီး ပျောက်ဆုံးနေမှုဟာ ယခုဆိုလျင် (၁) လပြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည် ၊ ပျောက်ဆုံးမှုအပြီး နယ်မြေကျွမ်းကြသည့်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားများကို ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဆပ်မကော်မတီအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ပေးပြီး ဧပြီလ (၂၆) ရက်နေ့မှစ၍ ပူတာအိုမြို့မှစတင်ထွက်ခွာခဲ့ကြပြီး ဖန်ဂရန် ရာဇီရေခဲတောင်ထိပ်သို့ အဖွဲ့ဝင် ( ၁၅ ) ဦးမှသွားရောက်ရှာဖွေခဲ့ကြသည့်အထဲမှ ရဝမ်တိုင်းရင်းသား ” ဆန်လုရမ်ဆိန်း ” ကို ကျွန်တော်မှဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါသည် . မေး ဖြေ 🎙မင်္ဂလာပါကိုဆန်လုရမ်ဆိန်းခင်ဗျာ …
ငွေ (၄) သိန်းရှိမှ အသက်ဆက်ရှင်နိုင်မယ့် မြေးလေးအတွက် အကူညီတောင်းနေရှာတဲ့ အဖွား
အဘွားရဲ့မြေးလေးအသက်ကို ကယ်ပေးကြပါအဘွားရဲ့မြေးလေးနာမည်က မစံပါယ်လို့ပေးထားတယ်။မြေးကလေးလူလောကရောက်လာတာမှ ၅လပဲရှိသေးတယ်ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ရောဂါပိုးတွေက မြေးလေးဦးနောက်ထဲရောက်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီရောဂါပိုတွေကိုသတ်နိုင်တဲ့ဆေးကို တစ်နေ့၂လုံးနဲ့၂၁ရက်ထိုး ပေးမှ သမီးလေးအသက်ချမ်းသာရာရမယ်လို့ ဆရာတွေကပြောတယ်။ဆေးကလဲ တစ်လုံးကိုတစ်သောင်းဆိုတာ့ ဆေးအလုံး၄၀အတွက် ၄သိန်းဆိုတော့ မြေးလေးရဲ့အဖေကမတတ်နိုင်ရှာဘူးလေ သူကတစ်ရက်လုပ်မှ တစ်ရက်စားရတဲ့ မြစ်ကမ်းကသဲထမ်းသမားပြီးတော့ ကလေး၅ယောက်ကရှိသေးတယ်။ ဒီနေ့ေ၂လုံးစာကိုတောင် ဆေးရုံကဆရာဝန်တွေကစိုက်ဝယ်ပေးထားတာ။ကုတင်၃၀၀ဆေးရုံက ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဆေးတွေနဲ့အခမဲ့ကုသပေးပေမယ့် ဒီဆေးကဆေးရုံမှာမရှိလို့ အပြင်ကဝယ်ရမှာပါ ။အဘွားရဲ့မြေးလေးရဲ့အသက်ကို ဝိုင်းဝန်းကယ်တင်ပေးကြပါဦး။ONE TO ONE ပြည်သူ့ကူညီရေးအဖွဲ့ ကိုဝမ်း ဖုန်း ၀၉၄၅၆၅၆၇၈၇၈ ( မန္တလေးမြို့ ) Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် အဘှားရဲ့မွေးလေးအသကျကို ကယျပေးကွပါအဘှားရဲ့မွေးလေးနာမညျက မစံပါယျလို့ပေးထားတယျ။မွေးကလေးလူလောကရောကျလာတာမှ ၅လပဲရှိသေးတယျဦးနှောကျအမွှေးရောငျရောဂါပိုးတှကေ မွေးလေးဦးနောကျထဲရောကျနတေယျတဲ့အဲ့ဒီရောဂါပိုတှကေိုသတျနိုငျတဲ့ဆေးကို တဈနေ့၂လုံးနဲ့၂၁ရကျထိုး ပေးမှ သမီးလေးအသကျခမျြးသာရာရမယျလို့ ဆရာတှကေပွောတယျ။ဆေးကလဲ တဈလုံးကိုတဈသောငျးဆိုတာ့ ဆေးအလုံး၄၀အတှကျ ၄သိနျးဆိုတော့ မွေးလေးရဲ့အဖကေမတတျနိုငျရှာဘူးလေ သူကတဈရကျလုပျမှ တဈရကျစားရတဲ့ မွဈကမျးကသဲထမျးသမားပွီးတော့ ကလေး၅ယောကျကရှိသေးတယျ။ ဒီနေ့ေ၂လုံးစာကိုတောငျ ဆေးရုံကဆရာဝနျတှကေစိုကျဝယျပေးထားတာ။ကုတငျ၃၀၀ဆေးရုံက ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ဆေးတှနေဲ့အခမဲ့ကုသပေးပမေယျ့ …
လွတ်ငြိမ်းခွင့်ဖြင့် ပြန်လွတ်သည့် သရုပ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်အား ဖခင်ဖြစ်သူက Lucky7ရုပ်ရှင်ထုပ်လုပ်ရေးသို့ အပ်နှံ
Zawgyicodeလွတ်ငြိမ်းခွင့်ဖြင့် ပြန်လွတ်သည့် သရုပ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်အား ဖခင်ဖြစ်သူက Lucky7ရုပ်ရှင်ထုပ်လုပ်ရေးသို့ အပ်နှံနိုင်ငံတော်သမ္မတ ကြီးဦးဝင်းမြင့်၏ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်း သက်သာခွင့်အမိန့် ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အတူ ယနေ့(မေ ၇) ပြန် လည် လွတ်မြောက်လာသော သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်အားဖခင်ဖြစ်သူ တေးသံရှင် အောင်ရင်က ကိုအုန်းဝင်း နှင့် မအေးအေး ဝင်း ( Lucky7ရုပ်ရှင်ထုပ်လုပ်ရေး) သို့ အပ်နှံခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။” မိုးအောင်ရင်ကို အနုပညာ အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဦးအောင် ရင်တို့က ကျွန်တော်တို့ Lucky 7ကို အပ်တယ်လို့ ပြောတာပါ။ ဒါပြီးရင် တော့ မိုးအောင်ရင်ကသူ့အဖိုး၊အဖွား တွေကို သွားကန်တော့ကြမ ယ်။ နောက်ရက် တွေ ကျရင် တော့ ဦးအောင်ရင်တို့ မိသားစုကိုးကွယ်တဲ့ ဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာ …
စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီးကို ရောက်လာတဲ့ စိတ်ဝေဒနာရှင်အများဆုံးက အရက်စွဲမှုကြောင့်ဖြစ်နေ
Zawgyicode စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီးကို ရောက်လာတဲ့ စိတ်ဝေဒနာရှင်အများဆုံးက အရက်စွဲမှုကြောင့်ဖြစ်နေ ရွာသာကြီးမှာရှိတဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီးကိုရောက်ရှိလာသူတွေဟာ အခုနှစ်တွေထဲမှာဆိုရင် အရက်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ စိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေများတယ်လို့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာသက်ဇော်က Duwun ကိုပြောပါတယ်။စိတ်ရောဂါဝေဒနာရှင်တွေဟာ အရက်စွဲရာကနေ စိတ်ကယောင်ကတန်းဖြစ်တာတွေ၊ စိတ်ကျရောဂါဖြစ်တာတွေ၊ ရှိသလို ဒုတိယအများဆုံးရောက်ရှိတဲ့ လူနာတွေကတော့ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။”အရက်ဆိုင်တွေကလည်းများလာသလို၊ အရက်သောက်တဲ့နှုန်းကလည်းမြင့်လာတယ်။ ဒီနှစ်တွေထဲမှာဆိုရင် အရက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး စိတ်ရောဂါရတဲ့ လူနာတွေဟာ များလာတာကို တွေ့ရတယ်။”လို့ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီးက ကထိကလည်းဖြစ် စိတ်ရောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာသက်ဇော်ကပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ၅ နှစ်တာကာလအတွင်း အရက်စွဲရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာ ၂ ဆခွဲလောက်မြင့်တက်လာနေတယ်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဌာနကသိရပါတယ်။ဒါဟာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ ပြဿနာအသွင်ဖြစ်နေပြီး အရက်သောက်မှုတွေကြောင့် ရောဂါ့ဖစ်ပွားမှုတွေ၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေနဲ့ ယာဉ်မတော်တဆမှုတွေပိုပြီးဖြစ်လာနေတယ်လို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ထွေးက နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနကိုပြောကြားထားပါတယ်။ အရက် သောက်သုံး ခြင်းကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ …
လူရှုပ်တဲ့လမ်းပေါ်မှာ အေးအေးဆေးဆေး လမ်းလျှောက်ချင်လို့ မြွေခေါ်လာတဲ့အဖိုးတဦး
ဈေးဆိုင်တွေ ဗလဗွနဲ့လူတွေရှုပ်ယှက်ခတ်နေတဲ့ လမ်းထဲဖြတ်လျှောက်တဲ့အခါ လူတွေတိုးဝှေ့ပြီးမသွားရအောင်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဥာဏ်ကောင်းတဲ့အဖိုးအိုဟာ မြွေအစစ်နဲ့တူလွန်းတဲ့ အရုပ်မြွေကို သူ့မှာကြိုးချည်ပြီး လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဟာသလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေ့ါ။ ဒီလိုမြွေထားတဲ့ idea လေးကိုတော့ တော်တော်သဘောကျတယ်။ လူတွေက မြွေကြီးလမ်းပေါ်သွားနေတာတွေ့တာနဲ့ကို ကြောက်တာနဲ့ ဝေးဝေးရှောင်ကြမှာပဲ မဟုတ်လား။ ရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် မြွေက အဖိုးနောက်လိုက်နေတတဲ့အတွက် မသိရင် သူကပဲ မြွေကို မွေးထားပြီး ခွေးလေးကြောင်လေးတွေလို ခေါ်လာတာနဲ့တောင် တူနေပါသေးတယ်။ သူနဲ့မြွေကိုမြင်တဲ့လူတချို့ကတော့ ညဖက်လည်း ညဖက်မို့ သဲသဲကွဲကွဲမမြင်ရတာကြောင့် ထိန့်လန့်ဖြန့်ကုန်ကြရပါတယ်။ ဖိုးဖိုးရဲ့ဥာဏ်လေးကိုတော့ ရွှေကွပ်ထားလိုက်ချင်ပါဘိနော်။ Source: Trendy Feed Penny Credit – shwemom Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ဈေးဆိုငျတှေ ဗလဗှနဲ့လူတှရှေုပျယှကျခတျနတေဲ့ လမျးထဲဖွတျလြှောကျတဲ့အခါ လူတှတေိုးဝှပွေီ့းမသှားရအောငျလို့ ထငျပါတယျ။ ဉာဏျကောငျးတဲ့အဖိုးအိုဟာ မွှအေစဈနဲ့တူလှနျးတဲ့ အရုပျမွှကေို သူ့မှာကွိုးခညျြပွီး …
ရွှေ(၄၇)ကျပ်သားရှိတဲ့ မကိုဋ် ဝတ်ဆင်ထားသော ဘုန်းကြီးတစ်ပါး နဲ့ သာသနာ
ရွှေမကိုဋ် ၄၇ ကျပ်သား ၀တ်ဆင်ထားသည့် ရှမ်းဘုန်းကြီးတစ်ပါးအား သာသနာနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်း ထိုင်း သံဃာ့ နာယကထုတ်ပြန် February 24,2019 ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ခင်းရိုင်ဒေသ မဆွေ ခရိုင် စေတီလွမ် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဘာသာရေးပွဲမှာ ရှမ်းဆရာတော် ကိုဘာ အရီယာချ (မိုင်းယောင်းမှလာရောက်) ဟာ ရွှေ၄၇ ကျပ်သား မကိုဋ် ဆောင်းပြီး ရွှေစလွယ်သိုင်း ပွဲတက်ခဲ့တာဟာ မသင့်တော်ကြောင်း ချင်ရိုင်ခရိုင် သံဃာ့နာယကက ထုတ်ပြန်ခဲ့ ပြီး ချင်းရိုင်အာဏာပိုင်တွေဟာ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို စစ်ဆေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ထိုင်းလူမှု ကွန်ယက်နဲ့သတင်းတွေမှာ ရွှေမကိုဋ် ဆောင်းပွဲတက်တဲ့ ရှမ်း ဆရာတော်သတင်းဟာ ထိုင်းပြည်သူတွေက ဝေဖန်မှုတွေပိုများလာတာတွေ့ ရပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့…
မီတာခ တိုးမြှင့်ကောက်ခံရန် ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ
အစိုးရအနေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ အသုံးပြုခကို တိုးမြှင့်ကောက်ခံရန် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်ကာ မကြာခင် ပြောင်းလဲကောက်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲရ်တစ်လုံက ပြောသည်။ ပင်လောင်းမြို့နယ် ပအို့စ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တီကျစ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် တီကျစ်ကျောက်မီးသွေး သုံးရေ နွေးငွေ့ဓာတ်အားပေးစက်ရုံဆိုင်ရာများ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်တွင် ၎င်းကအထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ “လက်ရှိမှာ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း လျှပ်စစ်ကို အလှည့်ကျစနစ်နဲ့ ခွဲဝေသုံးစွဲနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ မီတာခတွေ အခွန်ခတွေ ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အရှုံးတွေမြောက်များစွာ ပေါ်နေပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အခါမှာ ရန်ပုံ ငွေတွေ၊ ဘဏ္ဍာရေးတွေ တောင့်တင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်တစ်ယူနစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ စရိတ်ဟာ ၁၀၀ အထက်မှာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြည်သူလူထုကို ကောက်ခံတဲ့ နှုန်းထားက ၅၀ တောင်မရှိပါဘူး။ မီတာခတွေ တိုးမြှင့်ကောက်ခံဖို့ လုပ်နေပါပြီ။ ပြည် …
သားလေးရဲမြတ်သူ ကို ခွဲစိတ်ကုသလို့မရပါဘူးမွေးရာပါ အရိုးထဲက ဓာတ်တမျိုးကြောင့်ပါခုသားလေးက သာသနာ့ဘောင်ဝင်ချင်လို့သင်္ကန်းစည်း ကိုရင်ဝတ်ပါပြီ Source:Shwe kyar Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် သားလေးရဲမွတျသူ ကို ခှဲစိတျကုသလို့မရပါဘူးမှေးရာပါ အရိုးထဲက ဓာတျတမြိုးကွောငျ့ပါခုသားလေးက သာသနာ့ဘောငျဝငျခငျြလို့သင်ျကနျးစညျး ကိုရငျဝတျပါပွီ Source:Shwe kyar
အခုအစိုးရကနည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့ ဆွဲစိချင်နေတာ ဆိုတဲ့ စတီဗင်ဇော်ကြီး
Zawgyicode အခုအစိုးရကနည်းနည်းလေးမှားတာနဲ့ ဆွဲစိချင်နေတာ ဆိုတဲ့ စတီဗင်ဇော်ကြီး အစိုးရရဲ့ ဟာကွက်တော်တော်များများကို ဟာဟ သဘာဖြင့် Video ရိုက်ကူးပြီး ထောက်ပြခဲ့တဲ့ စတီဗင်ဇော်ကြီးက ခုနောက်ပိုင်းမှာ ထိုကဲ့သို့ Video များ မရိုက်ကူးဖြစ်တော့ပုံကို ခုလို ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။သိပ် လည်းမလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ ဒီဘက်ခေတ်က သိပ်လည်းလုပ်လို့ မကောင်းတော့ဘူးလေ။ အရင်အစိုးရနဲ့ အခုအစိုးက Life ကလည်း မတူတော့ဘူး။ ဒီဘက်ခေတ်အစိုးရက သိတယ်မှလား နဲနဲလေးမှားတာနဲ့ ဆွဲစားချင်နေတာ။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့လည်း နောက်ဆုတ်လိုက်တော့တာပါပဲ။ ၂၀၁၄ ထဲက ဒီဟာတွေကို လုပ်တာပေါ့။ ဒီဘတ်ခေတ်လည်း လုပ်ချင်ပါသေးတယ်။ ဒါမဲ့ ဒီဘက်ခေတ်က သိပ် စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် မလုပ်ရဲတော့ဘူး။ အရင်အစိုးရနဲ့ အခုအစိုးရနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် လုနေတဲ့အချိန်ုတုန်းကလုပ်လို့ကောင်းတယ်။ အခုကျတော့ သိပ် အမှားမခံတော့ဘူး။ မှားလိုက်တာနဲ့ …
ပုလဲမြို့နယ်တောင်ပေါ်ဒေသရှိ ကျေးရွာအများစုတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှုပြဿနာ ကြုံတွေ့နေရ
ကိုသားကြီး (ဒွေး) ရဲ့အကြည့်တွေကို ရှိန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ပိုင်ဇေရဲထွန်း
တနှစ်ကိုတစ်ခါပဲ နတ်ခင်းထားတဲ့ ကျော်ချောလမ်းပေါ်လာတဲ့ ရေလယ်ဘုရား၏ အံ့သြဖွယ်
မေလ ၂၁ ရက် နောက်ပိုင်းမှသာ မုတ်သံလေ ဝင်ရောက်နိုင်ဟု ဦးထွန်းလွင်ပြောပြီ